Maxay tahay Adeegyada Ilaalinta ee Duqaydu -- Khadka caawimada Qaranka? - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Maxay tahay Adeegyada Ilaalinta ee Duqaydu -- Khadka caawimada Qaranka?
Haddii fal dagaal lagugula kacay, kufsi ama qaabab kale oo weerar galmo ah, ama haddii aad halis ugu jirto in lagu weeraro, waxaad soo waci kartaa Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda. Waxaad talo iyo hagitaan ka heli kartaan telefoonka.
Qof kasta oo ka wayn 62 sanadood kaas oo weerar lagula kacay waxa uu soo waci karaa Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda si uu u helo talo, tilmaan iyo caawimo. Qaraabada, shaqaalaha degmadda ama kooxaha kale ee ka walaacsan ama garanaya in qof da’ wayn la weerarayo, way la soo xidhiidhi karaan. Adeegu waa bilaasha.
Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda waxa uu ka koobanyahay xirfad yaqaano wakhti ay wax ku dhegaystaan haya oo aqoon u leh iyo fahan waxa uu yahay weerarka iyo xad gudubka ku lidka ah dadka duqayda ah ku lugta leh.
Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga marka aad la xidhiidho xarunta. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah.
Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda waxa uu bixin karaa turjubaan, marka loo baahdo.
Adeega waxaa maalgeliya Maamulka Caafimaadka Norway.
Websaydka Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda waxa uu ka kooban yahay macluumaad qoraalo ah iyo barnaamij tababarka internatka ah.
Khadka caawimada qaranka 800 30 196
Websydka Adeegyada Ilaalinta ee Duqayda